Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ)
Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Bullous pemphigoid ဟာ ရှားပါးတဲ့ အရေပြားရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ အရေပြားမှာ အနီရောင် အကွက်တွေ အနေနဲ့ စတင်ပြီး ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ (သို့) လပေါင်းများစွာ အကြာမှာ ကြီးမားတဲ့ အရည်ကြည်ဖုတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ ကြာရှည်ဖြစ်ခြင်း (သို့) ကုသပျောက်ကင်းအပြီး မှာ ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် နာတာရှည်ရောဂါ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အသက် ၆၀ အရွယ် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပြီး လူနာမှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းရင် အန္တရာယ် ရှိတတ်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ချို့လူနာတွေမှာတော့ လက္ခဏာတွေ ပြသခြင်းမရှိပါဘူး။ အကွက်တွေဟာ အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ယားယံမှုနဲ့ ပူလောင်မှု တွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အရည်ကြည်ဖုတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ချိုင်းကြား၊ လက်၊ ဝမ်းဗိုက်၊ ပေါင်အတွင်းဘက်နဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ Bullous pemphigoid ရောဂါရှိသူ သုံးပုံတစ်ပုံဟာ ပါးစပ်မှာ ပါ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ အရည်ကြည်ဖုတွေဟာ ပေါက်ထွက်နိုင်ပြီးတော့ အနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းမရှိပဲ အရည်ကြည်ဖုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် (သို့) အရေပြားမှာ မပျောက်တော့တဲ့ ယားယံတဲ့ အကွက်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ အခြေအနေကတော့ လူပေါ်မူတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ရောဂါရှာဖွေမှုတွေ၊ ကုသမှုတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးကုသမှု ရွေးချယ်ဖို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
တိတိကျကျ မရှိပေမယ့် ကိုယ်ခံအားစနစ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ၊ အခြားရောဂါတွေနဲ့ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရေပြားပြဿနာတွေဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ် မကောင်းလို့ ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ အခြားအပြင်က ဝင်လာပြီး ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေကို တိုက်ထုတ်တဲ့ အင်တီဘော်ဒီ (antibodies) တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ ကိုယ်ခန္ဓာက ရောဂါတိုက်ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ Bullous pemphigoid ဖြစ်နေရင် ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အရေပြားအလွှာတွေ အတွင်းမှာ အင်တီဘော်ဒီ တွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီ အင်တီဘော်ဒီ တွေဟာ ရောင်ရမ်းမှုကို အားပေးပြီး အရည်ကြည်ဖုဖြစ်ပေါ်စေကာ ယားယံစေပါတယ်။
အခြား Bullous pemphigoid ကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အချက်တွေကတော့
ဆေး – အချို့ဆေးတွေဟာ Bullous pemphigoid ကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ (ဥပမာ ပင်နီစလင်၊ etanercept (Enbrel)၊ sulfasalazine (Azulfidine) and furosemide (ဆီးဆေး))။
အလင်းရောင်ကုထုံးနဲ့ ရောင်ခြည် ကုထုံးကို အသုံးပြုခြင်း – ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို အရေပြားရောဂါတွေ ကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုခြင်းဟာ Bullous pemphigoid ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ – ကင်ဆာရောဂါကို ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသနည်း)
ငါ့ဆီမှာ Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘ်ာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Bullous pemphigoid ဟာ အသက်၆၀ ကျော်သူတွေမှာ အများအားဖြင့် တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်းလေလေ ရောဂါဖြစ်နှုန်းမြင့်တက်လေလေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်နှုန်မြင့်စေတဲ့အရာ မရှိဘူးဆိုတာဟာ သင်ရောဂါမရနိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေအတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်က ရောဂါ ရာဇဝင် မေးမြန်းပြီး အရေပြား စမ်းသပ်မှု လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်ယံအရေပြားရဲ့ ဖေါင်းမှုနဲ့ skin sample ကို စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပြီး အချို့အခြေအနေတွေမှာ သွေးစစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေပြား အသားစ ယူခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Bullous Pemphigoid (ရှားပါးတဲ့ အရေပြားအရည်ကြည်ဖုထသော ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အရောင်ကျတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ corticosteroid ကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဟာ သောက်ဆေးရော ထိုးဆေးပုံစံနဲ့ ပါရှိပါတယ်။ ရောဂါကို စောစောတွေ့ပြီး ရောဂါပျော့သေးရင် လူနာတွေဟာ corticosteroid လိမ်းဆေးတွေကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဟာ ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဆေးတွေကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Bullous pemphigoid ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Bullous pemphigoid ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ညွှန်းတဲ့ ဆေးတွေအကုန်လုံးကို ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးပါ။
အာဟာရ ရှိတဲ့အစာတွေစားပါ။ (သို့) အရည်များတဲ့ အစာ စားခြင်းဟာ အစာစားစဉ်နဲ့ မြိုချစဉ် နာကျင်ခြင်းတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အရေပြားကို သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပါ။
အရေပြား ပြန်ကောင်းလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို စစ်ဆေးပါ။ ရောဂါပိုးဝင်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ အနီရောင်သန်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အရည်ထွက်ခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပြန်ရည်ကျိတ်ရောင်ခြင်းနဲ့ အဖျားတက်ခြင်းတို့ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
အဝတ်အစား၊ တဘတ်နဲ့ အိပ်ယာခင်းတွကို သေချာစွာ လျှော်ဖွပ်ပါ။
ရောဂါပိုးဝင်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။
အဖျားတက်ခြင်း၊ နုန်းခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်းနဲ့ အားနည်းခြင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆေးခန်းသွားပါ။
Bullous Pemphigoid. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bullous- pemphigoid/basics/causes/con-20028528.
Accessed Jul 13 2016.
မည်သည့်အကြောင်းများကြောင့် မွေးကင်းစကလေးများတွင် အသားဝါခြင်း ဖြစ်ရသလဲ